स्कुस खानुका छन् यस्ता फाइदै फाइदा, थाहा पाएपछि भन्नुहुन्छ वाह स्कुस !
October 11, 2020 9824
नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । सस्तो, स्वादिलो, सुपाच्य र स्वस्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तरकारी । स्कुसको मुन्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ ।
त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वास्थ्यका लागि कम्ता पोषिलो छैन । तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ । आफुसँग पाककला भए, अनेकथरी परिकार बनाउन सकिन्छ । स्कुस निकै गुणी तरकारी हो ।
मुटुको स्वास्थ्यका लागि
रगतमा हुने गुलियो पदार्थको नियन्त्रणमा सहयोगी
स्वस्थ गर्भावस्था’लाई सहयोग गर्ने
स्कुसको नियमित सेवनले स्वस्थ गर्भावस्था’लाई सहयोग गर्न मद्धत गर्छ । फोलेट वा भिटामिन बी सबै व्यक्तिको लागि आवश्यक छ । तर गर्भवती वा गर्भा’धान संस्कारको तयारीमा रहेका’हरूको लागि यो झनै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यस्ता मान्छेको लागि पनि स्कुसको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ ।
प्रारम्भिक गर्भा’वस्थामा, भ्रुणबाट मस्तिष्क र मेरुदण्डको उचित विकासका लागि फोलेट आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त फोलेट सेवनले बच्चाको मस्तिष्क वि’कास र सकुशल जन्म’मा समेत मद्धत गर्छ ।
२०० ग्रामको एउटा स्कुसले शरी’रमा चाहिने फोलेट र भिटामिन बीको ५० प्रतिशत माग पूरा गर्ने गर्र्छ ।यसैले, सन्तुलित आहारको एक भागको रूप’मा स्कुस खानु स्वस्थ ग’र्भावस्थाको लागि उत्तम हुन्छ ।
क्यान्स’र कम गर्न स’हयोग
उच्च पोषण’युक्त फलफूल र तरकारीको उपभो’गले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत पुयाउने गर्छ ।
एक अध्ययनले निश्चित मात्रामा स्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौगिकहरूले क्यान्स’र हुन सक्ने कोषि’कामा त्यसको असर कम गर्ने गरेको देखाएको छ ।
यद्यपि यी नतिजाहरू पूर्ण क्या’न्सर प्रति’रोधी भनेर प्रमाणित तथ्य भने होइनन् । तर यसले क्या’न्सर कमगर्न सहयोग गर्छ भन्ने विषय भने विभिन्न अध्ययनबाट प्रमा’णित विषय हो । यसबारे थप अनुसन्धान आवश्य’क देखिन्छ ।
बुढेसका:लमा हुने दृष्टि:दोष कम गर्न
फ्रि रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सि’द्धान्त हुन्छ । जसले शरीरका विभिन्न कोषहरूमा क्ष’ति पुर्याएर उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने दृष्टिदोष कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ ।
यसैले, भिटा’मिन सी पर्याप्त पाइने यो तरकारी’को नियमित सेवनले बुढेस’कालको दृश्य कम गर्न मद्दत गर्छ ।
मिर्गाैलाको काम’लाई सहज बनाउन
फ्याटी लिभर डि’जिज भनेको एउ’टा यस्तो समस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो कलेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । कलेजोमा जमेको धेरै बोसोले यसलाई ठीक’सँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा कलेजो’मा बोसो जम्ने कामलाई यसले नियन्त्र’ण गर्न सक्छ ।
मुसामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवा’एको मुसा’मा कोलेस्ट्रोल र फ्या’ट्टी एसि’डको मात्रा कम पाइएको थियो । तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छे’को कलेजो स्वास्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
स्वस्थ रूपमा वजन बढाउन
विभिन्न अध्ययन’हरूले स्कुस नियमित सेवन गर्ने’मा तौल बढ्ने तर यसले मोटोपनाको कुनै समस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौल घटा’उनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घटाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौ’ला बढाउन म’द्धत गर्छ ।
पाचन स्वास्थ्य’लाई सह’योग पुर्याउँछ
तपाईंको पाचन प्रणा’लीमा आवश्यक पर्ने वि’भिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहा’यक सिद्ध खानेकुरा हो । – अनलाइन खबर बाट
Prevफिल्ममा यस्तो अनौठो तरिकाले गाडि विस्फो’ट गरिँदो रहेछ (हेर्नु`होस् भिडियो)
Nextआज सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्
तपाईंको सिम कार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? थाहापाउन यसो गर्नु`होस्
विवाह’को दुई वर्षमै बिधवा बनिन् नायिका मेघना